2016 October | MoeMaKa Burmese News & Media
ကာတွန်း ဂျော်ဒီး – သင့်မြတ်ရေး မေတ္တာရေစင် (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆
တူမောင်ညို – အစွဲအလမ်းနဲ့ စွဲစွဲမြဲမြဲ ရပ်တည်တာဟာ လုံးဝ ကွဲပြားခြားနားပါတယ် (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၆ အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့၊ (NCA) စာချုပ်နှစ်ပတ်လည် အခမ်းအနားမှာ ပြောတဲ့ ကာချုပ်...
ဆောင်းယွန်းလ ● နိုဘယ်လ်ဆိုင်ရာ ဆင့်ပွားခံစားမှု (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၆ တခါတလေမှာ ငြင်းဆန်လိုက်တဲ့ အရာတွေက လက်ခံလိုက်တဲ့ အရာတွေထက် ပိုပြီး တည်တံ့တယ်။ လိုတာကော မလိုတာပါ ရတဲ့...
Think Art Cartoon Exhibition နိုဝင်ဘာ ၁၂ မှ ၁၅ ကျင်းပမည်၊ ဖိတ်စာ (မိုးမခ ကြော်ငြာ) အောက်တိုဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၆
မောင်မောင်စိုး ● ဝ နဲ့ မိုင်းလား ပဋိပက္ခကို အနီးကပ်ကြည့်ရှုခြင်း (တတိယပိုင်း-နိဂုံး) (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၆ ၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၂ဝဝ၈ အခြေခံဥပဒေအရ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်အမတ် ၂...
အတွင်းမီးကို ငြှိမ်းကြဖို့နှင့် မောင်မိုးသူ (ကုမုဒြာဂျာနယ်၊ ရန်ကုန်) မိုးမခ၊ အောက်တိုဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၆ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ တစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားမှာ နိုင်ငံ တော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က မိန့်ခွန်းပြော ကြားရာမှာ စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ အရင် အစိုးရသမ္မတ...
ကာတွန်း KZZH – ဖြစ်စဉ်ကို ပြောပါ … (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၆
မောင်မောင်စိုး ● ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် စစ်ပွဲကြားက ဂီဒွန် (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၆ ● ဂီဒွန် ယခုလပိုင်းအတွင်း ကချင်ပြည်နယ်ရှိ နာမည်ကျော် ခါဂါဘိုရာဇီ၊ ဖုန်ကန်ရာဇီတောင်များကိုကျော်လွန်၍ လူသိများသော တောင်ကြောတခုမှာ အင်ခရမ်ဘွမ်တောင်ကြောနှင့်...
ကာတွန်း ညီထွေး ● ရွှေသမင် ဘယ်ကထွက် …. (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၆
တည်ဘွားဦး ● ကလေးတယောက်ရဲ့ စစ်မြေပြင်သို့ ပြန်စာပေးပို့ခြင်း (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၆ မမီတော့တဲ့ ရထားကြီးကို ငေးပြီး လွမ်းမနေနဲ့တော့ အားလုံးရဖို့ စိတ်ကူးထားတယ်ဆိုရင် နိဗ္ဗာန်နဲ့ လွဲနေဦးမယ် သားသားမှာ လက်တွေလည်း...
ရွှေပိုးအိမ် (ပဲခူး) ● ပူလောင် အိုက်စပ်နေတဲ့ မိန်းမ (ဝတ္တုတို) (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၂၉၊ ၂ဝ၁၆ ပူလောင်အိုက်စပ်နေတဲ့ နွေပါပဲ။ အသက်တွေ တနှစ်ပြီးတနှစ်ကြီးလာတိုင်း ကျွန်မအမြဲ ကြုံနေကျနွေပဲလေ။ သတ္တလောကလို့ အမည်တပ်လို့ရမလား။...